शनिबार, ०६ कार्तिक २०७८, ०८ : १५
हत्केला शरीरको हतियार हो। प्राचीन कालमा ‘बुद्धिस्ट मंक’ हरुले जंगलमा तपस्या गर्दा विनाहातहतियार हत्केलालाई हतियारको रुपमा प्रयोग गरेको पाइन्छ। कराँते, तक्वान्दोजस्ता खेल खेल्दासमेत हत्केलाको राम्रो व्यायाम पुगेको हुन्छ। यस्ता खेल हत्केलाको सहायताले खेलिन्छ।
’अच्चम भएको छ मेरो जीवनमा। पाँच फिट सात इन्च घटीको केटो हेर्न पनि मन नलाग्ने मलाई आखिरीमा पाँच फिट चार इन्चको केटोसँग लभ परेको छ। आखिरीमा उसले मेरो मन चो-यो।
महिनावारी अघि (रजोवृत्तिको समय) महिलाको शरीर अत्यधिक तात्ने, राति खलखली पसिना आउने लक्षण देखिन्छ। कहिलेकाहीँ सपना देखिने भएकाले सपनाका कारण निद्रासमेत भंग हुन्छ। मनमा अशान्तपन बढ्छ। महिनावारी हुनुभन्दा करिब एक हप्ता अघि महिलामा यस्ता लक्षण देखिन्छन्।
‘उडेर, गुडेर आउने’ रोगको जोखिम
सोमबार बेलुका करिब ७ः३० मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुग्दा गोपालप्रसाद पाण्डेय भेटिए। उनी सिनियर अहेब हुन्। तर उनी न त हवाईजहाज चढेर नै जान लागेका हुन न आएका नै। उनी त त्यहाँ ‘हेल्थ डेस्क’ को संयोजकको रुपमा ड्युटीमा खटिएका थिए। उनको काम हो–नेपालमा ल्यान्ड गरेका यात्रुमा इबोला संक्रमणको लक्षण छ वा छैन भनेर निक्र्योल गर्ने।
कत्रो सजाय !
तिमीले छाडेर गइहाल्यौँ। खुसी छौ होला भन्ने आशा गरेकी छु। तिमीले छोडेर गएको पनि हेर्दाहेर्दै पाँच महिना भएछ। सायद अब त मेरो याद पनि आउन छाडिसक्यो होला। यसै बोल्न किन छोडेका हौँ ? मैले बुझ्न सकेकी छैन। मेरो के गल्ती थियो र ? केमा चित्त नबुझेको हो ?
करकाप हैन सहमतीमा सम्बन्ध
रजश्वला हुनुभन्दा अगाडि योनि चिलाउने तथा यौन सम्पर्क गर्न मन लाग्ने लक्षण देखिन सक्छ। यस्तो अवस्थामा पुरुष यौन जोडीले इच्छाबमोजिम यौन सम्पर्क गरेर सन्तुष्टि दिनु उचित हुन्छ। यस्तो अवस्थामा यौन सम्पर्क गर्ने वा नगर्ने, चाहना छ वा छैन भन्ने विषय भने महिलामै भर पर्छ। त्यसैले पुरुष यौन जोडीले महिला यौन जोडीले यौन सम्पर्कका लागि चाहना गरेकी छिन् वा छैनन् भन्ने निक्र्योल गर्न आवश्यक हुन्छ।
तीन वर्षअघि प्लस टु पछि ब्रिजकोर्स गरिरहेको बेला तिमीसँग भेट भएको थियो। त्यो भेटको क्षण अहिले सम्झँदा पनि रमाइलो लाग्छ। म्यासेन्जरबाट सुरु भएको तिम्रा र मेरा वार्तालाप मेरो मस्तिष्कमा अझै ताजा छ। ब्रिजकोर्स सकिएपछि तिम्रो र मेरो भेट नभए पनि मेसेन्जरबाट निरन्तर कुराकानी भइरहेको थियो।
रजश्वलापूर्वको यौन सम्बन्ध
सामान्यतः रजश्वला १० देखि १४ वर्षको उमेरमा भैसक्छ। अधिकांश रजश्वला सामान्य रुपमा चक्रीय प्रणालीमा चलिरहन्छ। कतिपय महिला (र बालिका)को भने रजश्वला भएको अवस्थामा दैनिक क्रियाकलापमा बाधा पर्ने, अन्तरसम्बन्ध बिग्रने, यौन जोडीसँगको सम्बन्ध बिग्रने तथा असामान्य अवस्था आउन सक्छ।
करङले शरीरको महत्वपूर्ण अंगलाई संरक्षित गरेर राखेको हुन्छ। मुटु, कलेजो, फोक्सो, आन्द्राजस्ता अंग करङको संरचनाभित्र रहेका हुन्छन्। करङले शरीरका अंगलाई अड्याएर राखेको हुन्छ। शरीरमा करङले घरको डाँडा–भाटाजस्तै काम गरेको हुन्छ। मेरुदण्डले शरीरमा खाँबाको काम गर्छ। काँधले मेररुदण्ड तथा करङलाई अड्याएको हुन्छ। घरको खाँबा र डाँडा–भाटा नै कमजोर भएको अवस्थामा घर लड्ने जोखिम हुन्छ। त्यसैले करङ मजबुत नभएको अवस्थामा शरीरमा समस्या उत्पन्न हुन्छ।
क्यान्सरबाट बच्न भ्याक्सिन
नेपालमा प्रत्येक वर्ष २ हजार ९ सय ४२ महिलामा पाठेघरको मुखको (सर्भिकल क्यान्सर) हुने गरेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन (एचपिभी इन्फरमेसन सेन्टर) का अनुसार पाठेघरको मुखको क्यान्सर लागेका मध्ये १ हजार ९ सय २८ महिलाकोे मृत्यु हुन्छ। नेपालमा महिलामा हुने क्यान्सरमध्ये पाठेघरको मुखको क्यान्सर पहिलो नम्बरमा आउँछ। १५ देखि ४४ वर्ष उमेर समूहका महिलामा पाठेघरकोे क्यान्सर हुने जोखिम बढी हुन्छ।
हिप साइजमा ल्याउने विधि
शारीरिक अंगमध्ये ओझेलमा पर्ने अंग हो हिप। हिपको मात्रै छुट्टै किसिमको अध्ययन कमै भएको पाइन्छ। हिप अध्ययनका लागि छायाँमा परेको अंगजस्तो देखिन्छ।
तिमीले मलाई बुझ्दा कोसौँ टाढा हुनेछु
म एउटा परिवार र श्रीमान् हुनुको दायित्व पूरा गर्न असक्षम नै भएँ। व्यापार पूरा घाटामा चल्दै थियो। लाखौं रुपैयाँ मैले डुबाइसकेँ। मानसिक र शारीरिक रुपमा विक्षिप्त अवस्थामा थकान लाग्थ्यो। लुथ्रुक्क पानीमा भिजेर, युद्धमा हारेर आएको योद्धा सिपाहीजस्तै आत्म मनोवल गिरेको थियो।
‘साडीमा केटीमान्छे सेक्सी लाग्छन्’
केटी मान्छेको बिहे गर्ने ठीक उमेर ? कम्तीमा २५ वर्ष।
साइबर सेक्सको जोखिम
सूचना प्रविधिको विकाससँगै यौन जोडी आफूसँग नहुँदा साइबर सेक्सको अभ्यास बढिरहेको देखिन्छ। सामान्यतः अनलाइनमार्फत पोर्नाेग्राफी एक्सचेन्ज, प्रत्यक्ष रुपमा यौनाङ्ग देखाएर तथा मल्टिमिडियामार्फत साइबर सेक्स हुने गरेको पाइन्छ।
करिब छ महिनाअघि २४ वर्षीय रमिला लामा (नाम परिवर्तन) आफ्नो स्वास्थ्यप्रतिको चिन्ता लिने समस्या लिएर मनोपरामर्शका लागि आएकी थिइन्। उनको सानैदेखि चिन्ता लिने स्वभाव थियो। १२ कक्षामा पढ्दा अनावश्यक रुपमा मनमा कुरा खेल्ने, चिन्ता लागिरहने, निद्रा नलाग्ने, समस्या देखा प-यो। एकजना साथीलाई उनले यो समस्या सुनाएपछि साथीले उनलाई मानसिक रोगको समस्या भएको हुन सक्ने बताइन्।
म केही बनेपछि मात्र तिमीसँग बोल्नेछु
बोल्दा बोल्दै माया बसेको पत्तै भएन। दुवैले एकअर्कालाई पछिको कुरा यादै नगरी माया गरियो। दुवैको बाटो फरक भए पनि मिलाउँदै जाने आँट ग-यौँ। म अलि हावा थिएँ, तिमी अलि सोझी।